Ogaden News Agency (ONA) – Wafdi uu hogaaminayo HAD oo ka qaybgalay shirweynaha 1aad ee ururka SORTU
Wafdi uu hogaaminayo HAD oo ka qaybgalay shirweynaha 1aad ee ururka SORTU
Wafdi uu hogaaminayo Hogaanka Arimaha Dibadda JWXO ayaa lagu caasumay shirweyne lagu yagleeley SORTU oo ah urur cusub oo loo samayay inuu u halgamo shacabka Basque oo doonaya inuu ka hoos boxo dawladda Spain, sida Somalida Ogadenia ugu halgamaya aaya ka tashigooda.
Ururka SORTU wuxuu mideeyay ururo badan oo shacabka Basque uu lahaa oo qaabab kala duwan u halgami jiray halkaaso lagu mideeyay Ururkan.
JWXO oo lagu caasumay Congresskii koowaad oo SORTU ayaa waxaa uga qayb galay Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee JWXO NH Cabdiraxman Sh. Mahdi.
Shirkan oo socday 22-23 Febraayo oo ay ka soo qayb galeen in kabadan 110 xisbi oo dacalada adduunka ka kala yimid, ayaa waxaa ka mid ahaa ururada fadhiyay Jabhadaha Polisario oo u halganta Xoreynta Saxaraha Galbeed ee hadda ku jirta gacanta Marooko ka dib markii Spain ay isaga carartay, Xisbiga Kurdiyiinta Turkiga, Xisbi falastiin ah, Axsaab ka socotay Kolombiya ee Koofurta America, Salvador, Philipine, Greek, Norway, Jarmalka , Portugal, Spain, catalan, Galithia, Bolivia, Brasil,Cuba, argentina, So Paolo, Swaziland, Koofurta Sudan, Mexico, ANC-Koofurta Africa iyo Ogadenya.
Dhammaan Axsaabtaas ka kala yimid dalalkaas iyo qaar badan oon halkan lagu xusin, waxay taageereen mabda’a caalamiga ah ee ah Shucuubta inay helaan Xaqa Ayaa Ka-Talintooda, wxayna u hambalyeeyeen Ururka Cusub ee SORTU.
Waxaa sidoo kale ay kula kulmeen madaxdii SORTU, wafdigii JWXO oo halkaas ay isku barteen. Wafdigii ka socday JWXO ayaa munaasabadan uga faa’idaystay inuu halganka shacabka S.Ogadenya u helo Saaxiibo Cusub oo qadiyadooda xaqqa ah taageera iyo Kuwo Hore oo xidhiidhkoodii uu dib u soo nooleeyay.
JWXO oo matalaysa Shacabka Somalida Ogadenia waxay taageero buuxda u fidisay dhammaan shucuubtaas xaq u dirirka ah. Waxay kaloo JWXO u dirtay ururka cusub dhammbaal taageero.
Waxaa shirka si buuxda looga taageeray qaddiyadda Somalida Ogadenia.
Hogaanka Arimaha Dibadda JWXO ayaa u gudbiyay warqadan taageerada ah ururka SORTU :